प्रधानमन्त्रीलाई ‘तिमी’ भन्दा चित्त दुखायो, सोध्नुहुन्छ – तपाई भन्न आउँदैन ? | Samabesi Khabar
प्रधानमन्त्रीलाई ‘तिमी’ भन्दा चित्त दुखायो, सोध्नुहुन्छ – तपाई भन्न आउँदैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा गर्ने सम्बोधनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मंगलबार गृहमन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यमहरुले तपाईँ नभनी तिमी भन्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।
‘हाम्रो आफ्नो भाषा छ । भाषाको मर्म छ । हाम्रो भाषामा बोलाउँदा हजुर भन्ने गरिन्छ। सञ्चारमाध्यमहरुले हजुर भन्दाखेरी साह्रै सानो ठान्छन् । अंग्रेजीको कपि गरेर मिस्टररमिस भनेर बोलाउन पाउँदा राम्रो लाग्छ । कसैलाई तपाईँ भन्नुपर्दा अचम्मको अपमान भएको जस्तो लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि सञ्चारमाध्यमहरुबाट निरन्तर हमला भएको समेत बताउनुभएको छ । लहैलहैमा लागेर सञ्चारमाध्यमहरुले विनम्रता र शालिनतामाथि हमला गरिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई आफ्नो सुर्‍याइदँ ठानेका छन् ।’